WDMSH | တတ်နိုင် VPS hosting အတွက်နှင့် dedicated server
24 /7ပံ့ပိုးမှု
ဒတ်ခ်ျအမ်စတာဒမ်€ 5.50 VPS
VPS Servers France 6% လျှော့စျေး
€ 8.50, DC ရဲ့ 20 + မှမိုဃ်းတိမ်ကို VPS Server ကို
ထိုင်း€ 14.00 VPS
VPS ကိုရီးယား€ 12.50
စင်္ကာပူ€ 15.00 VPS
သြစတြေးလျ€ 15.00 VPS
ယူကရိန်း 100% DMCA € 33 VPS
Bulletproof VPS Server များ€ 75
နားထောင်သူတစ် ဦး လျှင်ရေခဲစီးဆင်းမှု
ယူရို ၄.၅၀ မှ Plex Media Server
သီးသန့် Seedbox / Mediabox Hosting ကိုယူရို ၃.၅ မှဖြစ်သည်
သီးသန့် Seedbox / Mediabox Hosting ကို ၁၀.၅ ဒေါ်လာမှဖြစ်သည်
dedicated ယူကရိန်း - ကိယက်ဗ်, အခမဲ့ DMCA ကာကွယ်မှု
dedicated ဆွစ်ဇာလန်, အခမဲ့ DMCA ကာကွယ်မှု
dedicated ဘူလ်ဂေးရီးယား - ဆိုဖီယာအခမဲ့ DMCA
dedicated server များကိုကိုရီးယား-ဆိုးလ်
dedicated ပြင်သစ် - ပဲရစ်
dedicated ဗြိတိန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
dedicated ကနေဒါ - Ottawa
dedicated Warsaw ကိုပိုလန်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, ပြန်အမ်းငွေနှင့် GDPR
အလွန်နိမ့်သောစျေးနှုန်းများအတွက်ကမ္ဘာအနှံ့ရရှိနိုင်ပါသည်သင့်ရဲ့ website မှာ? ကျနော်တို့အထူးသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အဆင်ပြေအောင်, သင်ကွဲပြားခြားနားသော packages များအများကြီးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုလမ်းများတွင်သင်သည်အလွန်အကျွံပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်, သင်အမြဲသင့်ရဲ့ website မှာ upgrade နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အကြှနျုပျတို့သညျအစာရှောငျစုံလင်စနစ်တကျဆာဗာများဆက်ကပ်။ အားလုံးဒိုမိန်းအမည်များ us.And မှတဆင့်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း အခြားပံ့ပိုးပေးနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏စျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။ သင်တို့သည်လည်းစျေးနှုန်းအပိုဆွဲဆောင်မှုစေသည်ရာကိုမဆိုအခွန်များအတွက်ပေးဆောင်မည်မဟုတ်။
မှာစတင်ခြင်း€ 3.99/ လ
wdmsh.com ထံမှတစ်ဦးက VPS server ကိုကတခြား VPS server များနှင့်တသားတရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆာဗာတွင်ကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်း, ကို virtual server တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကဒီဆာဗာကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်သင်တို့သည်ဤမျှတစ်ဦး VPS Server နဲ့သင်တစ်ဦးအမြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် VPS server ပေါ်မှာချင်သောဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းဖို့လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
Starter Linux ကို / ဦးဝင်း VPS
VPS အသေးစား Linux ကို / ဦးဝင်း
VPS အသေးစား + Linux ကို / ဦးဝင်း
VPS အလတ်စား Linux ကို / ဦးဝင်း
အကြီးစား Linux ကို / ဦးဝင်း VPS
VPS XLarge Linux ကို / ဦးဝင်း
မှာစတင်ခြင်း€ 7.50/ လ
wdmsh.com ထံမှတစ်ဦးက Dedicated Server ကိုလုံးဝကိုယ်ပိုင် server တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဆာဗာပေါ်တက်အဆုံးသတ်နှင့်သင်ဆာဗာပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်လမ်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရှိသမျှသောဆော့ဖ်ဝဲကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြောင့် dedicated server အားဖြင့်သင်တို့ကိုအလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကြသည်။
နယ်သာလန် Server များ
ဘူလ်ဂေးရီးယား Server များ
ကနေဒါ Server များ
ပြင်သစ် Server များ
ဂျာမဏီ Server များ
ဗြိတိန် Server များ
ယူအက်စ်အေ Server များ
ယူကရိန်း Server များ
ဆွစ်ဇာလန် Server များ
စင်္ကာပူ Server များ
ဆစ်ဒနီ Server များ
Warsaw ကို Server များ
မှာစတင်ခြင်း€ 50/ လ
Server များ Hosting အကောင်းဆုံး VPS
Windows ကိုရမ်၏2GB ကိုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်
1250 ကို MB RAM ပါ
Network မှ 1000 Mbps ထိ
IPv4: 1 - မက်စ် 32
Control panel WHMCS / SolusVM
Linux only, Windows or Controlpanel need2GB Ram
2 GB ကို RAM ကို
40 GB ကို SATA
Linux သို့မဟုတ် Windows
အစီအစဉ်ကို hosting ယုံကြည်စိတ်ချရသောတန်ဖိုးနည်း VPS
အဆင့်မြင့် VPS အထုပ် hosting
4 GB ကို RAM ကို
50 GB ကို SATA
5 GB ကို RAM ကို
ဝဘ်ဒီဇိုင်နာများများအတွက်သင့်လျော်သော VPS အစီအစဉ်
6 GB ကို RAM ကို
60 GB ကို SATA
ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး VPS အစီအစဉ်ကိုယခုရ
8 GB ကို RAM ကို
75 GB ကို SATA
ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝါ Booster VPS, ကထုတ်စစ်ဆေး
12 ဓိက, upgrade
12 GB RAM, upgrade
100 GB ကို SATA, upgrade
WDMSH မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ကျနော်တို့ Web Hosting, Window, Linux ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံပြီး VPS Server များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အွန်လိုင်းစနစ်များသည်အခြားစနစ်များအားလုံးကိုစတင်အုပ်စိုးနေသောကမ္ဘာတွင်နေထိုင်နေကြသည်။ ဒီဖြစ်ပျက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရှင်းပါတယ်။ အွန်လိုင်းနှင့်ဒီဂျစ်တယ်စနစ်များ၏အင်္ဂါရပ်များသည်ကြီးမားပြီး၊ အများပိုင်ကွန်ယက်မပါဘဲမဖြစ်နိုင်သည့်အသုံးအများဆုံးကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးနိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကုမ္ပဏီတိုင်းတွင်လည်ပတ်နေသော CRM စနစ်များကိုစဉ်းစားပါ။ ဤစနစ်သည်ပိုမိုထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတောက်ပသောအွန်လိုင်းနှင့်ဒီဂျစ်တယ်စနစ်များကြောင့်ဒီတောက်ပသောစနစ်များကိုငါတို့ကမ္ဘာမှာလည်ပတ်စေနိုင်သည်။
သို့သော်ဤစနစ်များသည်ကောင်းမွန်သောဆာဗာသို့မဟုတ် hosting ကုမ္ပဏီ၏အကူအညီမပါဘဲအပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ဟာကြီးမားတဲ့စနစ်များနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအသုံးပြုချင်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ WDMSH.com သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် hosting နှင့်ဆာဗာများဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုအမြဲရှာဖွေနေသည်။
WDMSH.com မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်များကိုမှီခိုအားထားနိုင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများသည်အနာဂတ်အတွက်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လိုသည်။ ကြီးမားသောဒေတာ၊ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်များသည်ကုမ္ပဏီများအတွက် ပို၍ အရေးပါလာသည်။ မည်သည့်နိုင်ငံမှမဆိုသင့်အားဆာဗာများပေးပါသည် server များနယ်သာလန်သင်၏ကုမ္ပဏီတွင် CRM (သို့) အွန်လိုင်းစနစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ငါတို့သည်လည်းတစ်ခုပေး
စာရွက်စာတမ်းများနှင့်စနစ်များကိုသိုလှောင်ခြင်းအတွက်မကုန်ခန်းနိုင်သောနေရာ။ ဤရွေ့ကား ဆာဗာများ အားလုံးသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များ၏လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်နောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေးစနစ်များနှင့်အချက်အလက်ကာကွယ်မှုတပ်ဆင်ထားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဤဆာဗာများသည်စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ဆာဗာများသည်ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးမားစွာပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ လာမည့်လာမည့်ကြီးမားသောအချက်အလက်စနစ်များ၊ အချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အချက်အလက်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုကုမ္ပဏီများကဤစနစ်များကိုစတင်စမ်းသပ်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့အတွက်ဗားရှင်းငယ်များအသုံးပြုရန်နေရာလိုအပ်သည်။ ဤစနစ်များကိုသင့်တော်သောနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုရန်သေချာစေရန်သင့်တွင်သိုလှောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤနေရာသည် WDMSH.com ဆာဗာများ ၀ င်ရောက်ပြီးဤရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရန်သင်ကူညီနိုင်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကို web hosting အတွက်အဘို့အမြင့်ဆုံး privacy ကို WDMSH!
အမြင့်ဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူ Hosting ကိုအကောင်းဆုံး WDMSH!
ယခုသေးပါဘူးအပေါ်မူပိုင် 2017 © WDMSH။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။